トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Farqiga of aragti ruuxiga ah iyo faal, farqiga u ah eegay maal-lagala baxo
Ma og tahay faraqa u dhexeeya aragtida ruuxiga ah iyo faal?
Dadka qaar waxa ay inta badan wareersan ee maal-sheegida iyo litchi, laakiin waxa ku jira waa aragtida ruuxiga ah in fikradda ah faal in ay sax ah.
nasiib-sheegis loo kala qaybin karaa saddex nooc, si ay sheegayaan in maal-sheegistii ee eraygiisii ??aragti ruuxiga ah waxaa ka mid ah mid ka mid ah, in fact, Inochibokusho (alwaax qaali ah laga yaabo)
3 waxaa loo qaybin karaa nooc.
nolosha statistics, Shui Feng, waa nasiib-u sheegay oo ku salaysan xogta, sida hore iyo magaca xukun.
Bok faal isticmaala dareen lixaad, aragti ruuxiga ah waxaa halkan lagu tilmaamay. Waxa uu noqonayaa mid ruuxi ah, sida xitaa Bok (I). Waa
wajiga sida palmistry iyo wajiga wajiga, faaliyo xogta jirka. Waxa kale oo loo kala saari doonaa sidii marxaladda (sidaas) haddii aad isticmaasho qalabka jirka, sida kaararka tarot iyo talooyinka.
qaar ka mid ah, sida tarot waxyoonay, laakiin sidoo kale waxaa jira isku-dar ah aniga iyo wajiga ah, fadlan xasuuso oo asal ahaan waxa jira saddex nooc.
In si kale loo dhigo, aragti ruuxiga ah iyo faal ma aha waxyaabo kala duwan, waa in aragti ruuxiga ah waa mid ka mid ah saddex nooc oo maal-sheegistii.
Sida aan sharaxay farqiga u of psychics iyo maal-lagala baxo
hadda, maxaa yeelay, maal-sheegida iyo litchi khasab ma aha in loo siman yahay, eegay maal-lagala baxo waa ka duwan yahay. Wuxu leeyahay in derjada sidoo kale waa Nasiib-lagala baxo, laakiin nasiib-lagala baxo uusan daruuri derjada. Dadka qaba sida derjada sida riyada ruuxi
iyo ruuxi ah waa, laakiin waxaad tidhaahdaan, waa nasiib-lagala baxo waa derjada, qofka fuliyay faal ee statistics ama hore iyo magaca xukunka, waxaa jira a maal-lagala baxo aan la derjada ah. Haddii
Marka sharaxaad kooban noqon doonaa wax
aragti ruuxiga ah iyo aragti ruuxiga ah, derjada waa inay ruuxaan arkeen masuulka qofka wada tashiga, u gudbiyo si aad u hesho la-tashiga uu fariin ka ruuxyada mas'uulka wax.
masuulka jinni oo qof ayaa la sheegay in ay leeyihiin, sida magacaba ka muuqata, waa ruux si ay u ilaaliyaan dadka ay. Marka tashiga kuwaas oo isku dayay in uu Fumo wadada qaldan, waa joogaan taas oo u horseedi doonaa in aad ma Fumihazusa wadada.
Si kastaba ha ahaatee, dadka caadiga ah ay awoodaan in ay fariin ka ruuxa mas'uulka hesho ma noqon karo, waa in aan la weydiin litchi si derjada ah.
in ay jecel yihiin in ay leeyihiin aragti ruuxiga ah, waxaa jira dareen u lahayn in ay weydiiso khabiir u maal-lagala baxo farqiga
aragtida ruuxiga ah iyo faal iyo psychics iyo farqiga maal-shaqaalaha bangiga sababta ogtahay oo waxaad ku tidhaahdaa waxaa loo baahan yahay in meel, marka aad codsato jiraan wax qiimaynta dhibaato, asal ahaan, sidoo kale weydii in ay qiimaynta dhibaato in ay iyaga ku waynaynin gaaladii in Faaliyihii derjada, waxaa jira dareen ku jirin innaba.
dabcan, jawaab lagu kalsoonaan karo ma laga heli karaa iyada oo aan u socdaa in la garaaco.
ruux aragti sidoo kale waxaa sidoo kale goostay leh faal aragti ruuxiga ah
waa u xoogga in la odoroso sida image ah dunida in aysan u muuqan in ay maanka psychics. Inkasta oo uu yahay in meel la tashato caleemo xisbiga iyo derjada, aragti ruuxiga ah waa suurto gal, waa scry gaar ahaan caan ku ah telefoon maal-sheegistii.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kala duwanaan shaqsi ee video ah in la soo bandhigay, iyadoo ku xiran waafaqid iyo Milanello ee wadatashiga derjada kii, si ay u noqon ama aan si fiican u arki karin, oo aad iman kartaa off nasiib daro.
dhab ah derjada ka hits, oo kaliya sababtoo ah meel ka baxsan macnaheedu ma aha in psychics of been abuur ah. Sababtoo ah waa xogta tirakoobka marka la eego
maal-sheegistii, dabcan, ma xaqiiqada ah in 100 boqolkiiba. Riix halkan si aad u yidhaahdaan, maxaa yeelay baxay, macnaheedu ma aha maal-lagala baxo waa been abuur ah.
sheekada ah in aadan u baahan tahay macluumaad ah, sida taariikhda dhalashada si aragti ruuxiga
litchi waa jidka soo sheegnay, maxaa yeelay, waa ficilka ee soo bandhigeen video ah on maskaxdaada ah derjada, uma baahna xogta, sida taariikhda dhalashada ee wada tashiga ee.
derjada inta badan waa in ay leeyihiin image ah laga shakiyo, waxaa jira nixi aad u, laakiin nasiib daro run ahaantii been abuur ah oo been derjada, in scammers sida ay jiraan qaar ka mid ah noqon lahayd xaqiiqda. In si ay u ma lagu siri by faalsada ah
, sida hal hab si garto in ama aan a derjada dhab ah, "dadka u yimaadeen inay maqlaan xogta taariikhda dhalashada uu shaki ku jiro" Waxaa jira dad in. Si kastaba ha ahaatee, shaqsi ahaan waxaan waxaa ka soo horjeeda opinion this. Iyadoo sidoo kale la isticmaalayo
view ruuxiga ah ee awoodda, si ay u isticmaalaan xogta xataa tirakoobka, labada derjada kuwaas oo isku dayi doonaa inuu kuu soo dhowaado ka geeddi-socodka ah (Faaliyihii) ayaa sidoo kale ka jira.
aragti ruuxiga ah by waafaqid iyo Milanello, waa in uu jiro unevenness in muuqaalka kore ee video ah. Taasi waa sababta samaynta qiimaynta isticmaalaya xogta tirakoobka si kaabayaal aan aaminsanahay in waxa macno.
Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah psychics in qofka helay xogta, sida taariikhda dhalashada iyo magaca noqdo si cad u fududahay si aad u aragto video ku.
dhab ahaan, si ay u sheegto in ama aan derjada dhab ah, in ama ma uu dhegaysan taariikhda dhalashada ku duugay buxo, waxa ay u muuqataa in ay jirto saamayn gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, dhinaca kale, innagu waxaynu nahay halis nooc ayaa sidoo kale sida dumarka uurka leh ee yaraynta kulan ee fursadda derjada ah.
Sidaas daraaddeed, haddii derjada waa in dhab ah ama been abuur ah, my opinion weli waa in sidoo kale waa in aan u sheego in dhidibka a qiimaynta ee kala duwan.